बलिउड फिल्मका तीन ठूला सुपरस्टार एकै फिल्ममा देखिने ! – Hotpati Media
बलिउड फिल्मका तीन ठूला सुपरस्टार एकै फिल्ममा देखिने !
२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १९:२१ मा प्रकाशित (7 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
एजेन्सी– बलिउड फिल्मका तीन ठूला सुपरस्टार सलमान, शाहरुख र आमिर खान एकसाथ फिल्ममा देखिने भएका छन्। चाँडै नै सलमान, शाहरुख र आमिर एकसाथ फिल्ममा देखिँदैछन् ।
फिल्मफेयरले लेखेको छ, ‘आमिर खानको निर्माण र अभिनय रहने फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ मा सलमान र शाहरुखको अभिनय रहनेछ ।’ तर, अहिलेसम्म यस विषयमा निर्माण टिमबाट कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो फिल्मको चाँडै छायांकन सुरु हुँदैछ । सन् १९९४ मा आएको हलिउड फिल्म ‘फरेस्ट गम्प’ को हिन्दी रिमेक ‘लाल सिंह चड्ढा’ मा आमिर र करीना कपूर मुख्य भूमिकामा देखिँदैछन् । यसअघि दुईले ‘तलास’ र ‘थ्री इडिएट’ मा काम गरेका थिए । फिल्ममा सलमान र शाहरुख विशेष भूमिकामा देखिने बताइएको छ । दुईले निर्वाहा गर्ने चरित्रको फिल्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने फिल्मफेयरले उल्लेख गरेको छ ।
शाहरुखले फिल्म गर्ने वचन दिइसकेका छन् । अब, सलमानको प्रतिक्षा भैरहेको छ । उनले पनि फिल्म गर्न मानेको खण्डमा पहिलो पटक बलिउडका तीन खान एकसाथ पर्दामा देखिनेछन् । एकसमय एकअर्काका कट्टर दुश्मन मानिने सलमान, शाहरुख र आमिर केही समययता निकै घनिष्ट छन् । एकअर्कालाई हरेक कुरामा सहयोग गर्ने गरेका छन् ।